Welcome to Aayaha Nolosha » MICNAHA IYO QIIMAHA BISHA RAMADAAN (QEYBTA 10:AAD).
Taasina waa cibaado uu rasuulkeenii aad ugu dadaali jiray (scw). Waa mid sii adkaynaysa inuu qofka Muslimka ahi bisha Ramadaan ka fogaado jacaylka Aduunayada hawada nafta, oo uu Rabbi sifiican u caabudo, kuna mashquuo jacaylkiisa, xusuustiisa, akhriska Kitaabkiisa iwm. 2. Sakada fitriga, ee labixiyo, dhamaadka Soonka inta ka horaysa Salaada Ciida.
Waana sadaqo larab in laga bixiyo qof kasta oo Muslim ah, oo noolaaday qayb bishii Soon kamid ah iyo Maalinta Ciida ah, haya-raado ama hawey-naadee.
Waxaana larabaa inay Soonkeenii Caraf iyo qurux ka buuxiso, Masaakiintana u noqoto maalinta ciida ah farxad, siayna maalintaa barakaysan uga fikirin waxay cuni lahayeen, ama ayna baahi la xanuunsanin.